६.६८ अंक घटेर नेप्से २५७०.८१ विन्दुमा, ३ अर्ब ६२ करोड बराबरको शेयर खरीदविक्री
असोज १८, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ६ दशमलव ६८ अंक अर्थात् शून्य दशमलव २६ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो दिन नेप्से परिसूचक २ हजार ५७० दशमलव ८१ विन्दुमा झरेको हो । यो दिन कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्रकोे ७६ लाख ५३ हजार २२० कित्ता धितोपत्रको ४८ हजार २३६ पटकमा रू. ३ अर्ब ६२ करोड ७७ लाख ९९ हजार ९३५ बराबरको खरीदविक्री भएको हो ।
कारोबारमा आएका २२७ ओटा धितोपत्रमध्ये आशा लघुवित्त वित्तीय संस्थाको धितोपत्र मूल्य १० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । उक्त कम्पनीले २५ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै कम्पनीको शेयरमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा मैलुङ खोला जलविद्युत् कम्पनीको शेयरमूल्य ९ दशमलव ९९ प्रतिशतका दरले वृद्धि भएको छ ।
सबैभन्दा बढी शेयरमूल्य घट्ने कम्पनीमा मनकामना स्मार्ट लघुवित्त रहेको छ । उक्त कम्पनीको शेयरमूल्य अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा ९ दशमलव ३८ प्रतिशतले घटेको हो । कम्पनीको शेयरमूल्य प्रतिकित्ता रू.१ हजार ८८५ मा झरेको हो ।
सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री युनाइटेड मोदी हाइड्रोपावरको भएको छ । उक्त कम्पनीको रू. १२ करोड १२ लाख २१ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको हो । त्यसैगरी दोस्रोमा नेपाल बैंकको रू.११ करोड ३५ लाख १४ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचकमध्ये होटल एण्ड टुरजिम समूहको परिसुचक शून्य दशमलव ४३ प्रतिशत,अन्य समूहको १ दशमलव २९ प्रतिशत,लघुवित्त समूहको १ दशमलव ४७ प्रतिशत र जीबन बीमा समूहको परिसूचक शून्य दशमलव शून्य ४ प्रतिशत बढेको छ भने बाँकी समूहको परिसूचक घटेको हो ।
त्यसैगरी सबैभन्दा बढी वित्त समूहको परिसूचक २ दशमलव ४७ प्रतिशत घटेको छ । त्यस्तै बैकिङ समूहको शून्य दशमलव २१ प्रतिशत,ब्यापार समूहको शून्य दशमलव ६८ प्रतिशत,विकास बैंक समूहको १ दशमलव ८७ प्रतिशत,हाइड्रोपावर समूहको २ दशमलव ४ प्रतिशत,निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव १२ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसैगरी उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव ५२ प्रतिशत,म्युचुअल फण्ड समूहको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतका दरले घटेको छ ।